23 Apps Unoda Kuti Download Asati Rokufambira | Save A Train
musha > Travel Europe > 23 Apps Unoda Kuti Download Asati Rokufambira
Nguva yekuverenga: 12 maminitsi(Last Updated On: 10/07/2020)
Currency AppWe achangobva akanyora Blog pamusoro Akatasva nevana muchitima uye akapa imi mazano pakuchengeta nepwere dzenyu vakagamuchira. kuverenga mabhuku, kuridza Uno uye kuteerera audiobooks ndechimwe kunofanira nokuti munhu, asi kune matani emapurogiramu ekuti utore pasi usati waenda kunze uko isu tinotenda kuti haangofadze iwe asi kukubatsira iwe kuti ugadzire rwendo rwenyu zvakawanda vakarongeka uye mafaro! Kubva App Store kuna Google Play, taona vakagumisa vamwe zvakanakisisa 23 Apps Unoda Kuti Download Asati Rokufambira. All zvaunongoda smartphone uye pane imwe nguva asati kwako rwendo inotevera.
Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, Iwo Akachipa Kwazvo Chitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
muri kana zviri pamutemo muguta kushanyira kana kwete, Airbnb izita mhuri. Zvechokwadi ichi ndechimwe Apps unofanira download pamberi hwokufambira. The App anopa kure isingadhuri mitengo, uye zvimwe zvechokwadi ruzivo nokubvumira vanoshandisa kugara munharaunda, kana mumba mavo. The Anwendung anopawo mamiriro inonzi Trips, iyo inopa Zvinoitika kusarudza kubva panguva yako ikoko. Tine chokwadi hazvisi refu kusvikira yarinopa zvose unofanira mumwe zvinofambidzana, asi ikozvino, zvokusarudza vavanopisira hadzisimbori zviripo kudhanilodha nayo.
Dijon kuenda kuParis nechitima
Inodzokera kuParis nechitima
Lille kuenda kuParis nechitima
London kuenda kuAmsterdam nechitima
2. Mapurogiramu Iwe Anofanirwa Kurodha Usati Wafamba Kwekupedzisira-Minute Hotel Kamuri: Hotel Manheru
Chokwadi ndechokuti dzimwe nguva Airbnb wako richawira kuburikidza. Ndizvo chete Zvakashatira ari Anwendung. Asi kwete kunetseka, unogona uchiri chirongwa B. Hotel Manheru yakavimbika basa kuti Anonakidzwa ekupedzisira yemaminitsi zveefa. The kambani ishamwari mumahotera kupa discounts ari chinhu dzimba, uye uchazonakidzwa bhuku rimwe pasi 10 masekondi. You kumubatsirawo 24/7 vatengi kubva Hotel Manheru chikwata, kana chinhu anoenda neparutivi.
London kuenda kuBrussels nechitima
London kuti Paris nechitima
Linz kuSalzburg nechitima
Inoshanya kuParis nechitima
3. Mapurogiramu Ekudhaunirodha Asati aenda Ku pre-booked Mahotera Mahotera: Hopper
Hopper ari kutiza uye pahotera App kuti anowana iwe akanakisisa mitengo kuti Réservation. It inoongorora date kuti chamber mitengo uye kufanotaura yakachipa pashiri nguva kuchengetera dzimba uye bhuku ndege. Maererano Website ayo, Unozviti munhu 95% Kubudirira mwero kwevaongorori pamusoro Reservations kusvikira gore pachine. Kusaipa!
Munich kuenda kuVienna nechitima
4. Mapurogiramu Iwe Anofanirwa Kutora Usati Wafamba Mutengo Kuenzanisa: Kayak
Patinenge kare ane Apps mashoma pano kuti pekugara uye kufamba zvirongwa, Kayak ari zvose-in-imwe Anwendung rinobatsira enzanisa mitengo pakati akasiyana kutsvaka injini yokufamba kwenyu zvose zvinodiwa. Izvi zvinosanganisira hôtels, vols, Car Rentals, uye kunyange kufamba package. Take advantage of its massive amounts of comparisons to book all the travel you’ll need in one spot.
Munich kuSalzburg nechitima
Vienna kuenda kuSalzburg nechitima
Graz kuenda kuSalzburg nechitima
London kuenda kuLyon nechitima
5. Mapurogiramu Iwe Anofanirwa Kurodha usati waenda kuTiketi Zvitima: Save A Train
Kana uri parwendo Europe yose, pane zvakanaka mukana unenge uchiita nzira yenyu nechitima. Public chokufambisa nzira mu Europe vane mukurumbira wavo muchinjikwa-nyika Links, uye apo Vols vari kutsanya, nezvitima vari nyore, kazhinji, uye basa zvizhinji pakutengeserana. Kuri kuti uri kudiwa chitima matikiti, kukopa Save A Train App kuti rokutenga zvakachipa uye nyore.
Dusseldorf kuMunich nechitima
Dresden kuMunich nechitima
Nuremberg kuMunich nechitima
Bonn kuMunich nechitima
6. Mapurogiramu Ekudhaunirodha Asati afamba Zvekunakidzwa Pana Endai: Netflix
By ikozvino tose kuziva chii Netflix zviri. Kana ukarega, kugamuchira kuti nyika yose itsva! Sign nokuda akasununguka muedzo, kukopa zvose kufarira anoratidza kana mafirimu uye anoiona paunenge uri muchitima, pasina kudikanwa WiFi! Yeuka kuti siyana zvinoratidzwa dzinowanikwa maererano uri chii nyika kushanyira, saka kana uri zvachose muropa chete, Ivai nechokwadi kukopa sezvo Zvikamu zvakawanda sezvinobvira usati kuyambuka muganhu!
Amsterdam kuenda kuLondon nechitima
Rotterdam kuenda kuLondon nechitima
7. Makakamura Yekushandisa Your With Friends: Splittr
Kuenda neshamwari? Hukuru! Imwe nyore nzira kuti zvinhu kuti usanzwa iri kana musingadi Makakamura yenyu mari kufamba nemazvo. Dzivisa kukonana uye kushandisa foni kuti nyore kutsemura mari pakati shamwari. Kana uine boka, uyu ndiye mumwe Apps zvaunofanira download asati kufamba. Splittr iri zvakananga vanhu vari parwendo. Pinda mari pamusoro vanoenda, kusanganisira iye akabhadhara chii uye Anwendung achaita zororo.
Kushanyira nyika dzakasiyana nedzimwe mari? Hapana dambudziko. All mari vanotsigirwa uye unogona vanosanganisa mari usina kuita currency kupinduka pachako.
Amsterdam kuBerlin nemvura
Leipzig kuenda Berlin nechitima
Hanover kuenda Berlin nechitima
Hamburg kuenda Berlin nechitima
8. Kudzidza To How Zvakawanda Tip: Globe Tips
Kunyange Anwendung ichi inowanika chete iOS, GlobeTips chinhu chinoshamisa Rinobatsira avo kuvhiringidzwa pamusoro tipping pose. Izvi zvinonyanya kukosha kune vafambi vaimboita chipunu-chinotungamira upfumi vanotambura vachiri kunze kwenyika. Ungave uri muFrance kana Spain, take advantage of GlobeTips to learn how much money to tip all professions.
Nuremberg kuna Stuttgart nechitima
Munich kuenda kuStuttgart nechitima
Frankfurt kuenda kuStuttgart nechitima
Heidelberg kuenda kuStuttgart nechitima
Kana uri munhu huta mufambi, imwe yeiyo Mapurogiramu aunofanirwa Kurodha usati waenda kune Calm, chiri chishandiso chichava shamwari yako yepamoyo. Izvi batsira kufamba mudziyo ane netsapo akasiyana kufungisisa kuti mwoyo, kuzvipira rakanyorovera, kufema uye zvakawanda. Rinopawo rakanyorovera ruzha kukubatsira faranuka. Sezvo akasimbisa kubuda mufambi pachangu, Zvinyoronyoro kunondibetsera kuchengeta wangu, tsime, calm on the road.
Paris kuenda kuStrasbourg nechitima
Luxembourg to Strasbourg nechitima
Nancy kuenda kuStrasbourg nechitima
Dijon kuenda kuStrasbourg nechitima
10. Kuchengetedza Memories Your: Live trekker
Achinyora ari magazini akura-chikoro zvikuru. Asi chinhu papepa zvinoreva ukamhanya mukana kurasikirwa nayo, kunyanya kana uri kushanyira nyika akawanda. Imwezve yemapurogiramu ekuti utore pasi usati waenda ndeye livetrekker.com. Journal Nzendo dzako saka unogona kutarira shure kwako nzendo riri dyidzana mepu. The Anwendung inocherechedza paunobuda, wokupemberera dzvuku mutsetse pamwe mepu iri chaiyo nzira iwe tora; ari Anwendung uyewo monitors nokukurumidza wako uye kukwira, zvichiita huru ushingi vafambi. wedzera mifananidzo, Video, makaseti rugwaro munzira, kutanga Multimedia pakufamba dhayari unogona kuudza! Free, iOS uye Android, livetrekker.com
Rimini kuenda kuMilan nechitima
Roma kuenda kuMilan nechitima
Bologna kuMilan nechitima
Verona kuMilan nechitima
11. Kuti Ramba Uchizvidzora Takarongwa: PackPoint
Zvichida Rinongova nokufarisa kuenda rainakidza, asi pane nguva dzose chinhu tinokanganwa kuita kana kurongedza pamberi rwendo. Luckily zvemichina ari pano kuzoponesa zuva zvakare. Download PackPoint! It akatarisa ekunze for mazuva uye nzvimbo rwendo rwenyu. Zvichakubatsirawo kumbira kuti kusarudza zvinhu unogona kubatanidzwa uchiri nzendo, akadai musangano zvebhizimisi, mumwe dzinoshambira pane dziva, kana chinoshamisira chisvusvuro. Ipapo zvichava kupa munhu chiputiriso pasi zvinhu zvaunofanira auye kunobva zvinhu izvi. Snazzy, rudyi? You can also share what you have found with your friends, kuita Nzendo dzavo nyore, wo! saka yeuka muromo ichi zvinokosha Apps zvaunofanira kukopa asati kufamba.
Brussels kuenda kuAmsterdam nechitima
Hamburg to Amsterdam nechitima
Berlin kuenda kuAmsterdam nechitima
Paris kuenda kuAmsterdam nechitima
12. Nokuti Advice On Activities: TripAdvisor
TripAdvisor chinhu Super Anwendung kuti anogona kukupa mamiriyoni wongororo bedzi pamusoro chinhu, mune kukurumidza uye nyore nenzira! The chakanakisisa Chikamu nezvazvo ndezvokuti wongororo, nepfungwa, mavhidhiyo, uye mifananidzo vari kubva vanhu CHAIYO, saka imi munoziva kuti pamutemo! Try out TripAdvisor’s Near Me function to find well-reviewed places close by, asi yakanakisisa Muratidze Anwendung anofanira kupa inhamba nyika nayo inotsigira - zviri chete kwose kwose, kuiita zvakafanira mutungamiriri nerimwe mufambi. Unogonawo kubvunza zvakananga mibvunzo vakafamba Anwendung wacho forum kana kuwedzera pachako wongororo ako nenzira yakafanana kuti rubatsiro.
Cologne kuenda kuFrankfurt nechitima
Munich kuenda kuFrankfurt nechitima
Hamburg to Frankfurt nechitima
13. Kudzidza kutaura Like A Local: Duolingo
Kunyange zvazvo kutaura zvishoma nezvishoma pamusoro-kuwedzeredzwa ruoko nemasaini sokuti mafaro, dzimwe nguva unogona kuwana shoma richikufinha. Enter Duolingo. Kana uri zvakakomba pamusoro pekubatira ari pamwe veko, Download Anwendung ichi!
Rinopa mutsva-pamwero makosi, asi zviri zvakare mukuru chishandiswa avo vachitsvaka kukwesha pasi mumitauro. Unogonawo Chat pamwe bots mu vakasarudzwa mitauro. This can be particularly helpful when you’re trying to learn the phrases you’re likely to use the most abroad.
Luxembourg kuenda kuBrussels nechitima
Antwerp kuenda kuBrussels nechitima
Amsterdam kuBrussels nechitima
Paris kuenda kuBrussels nechitima
14. Kuwana Out zvavari Vachiti: Google Translate App
Patinenge kare inokurudzirwa Duolingo, kana uri nguva-crunch uye kuda kutaura-zvechokwadi nguva, Google Translate ndiyo Anwendung kuti kushandiswa. Mupepa inzwi pamutemo uye zvikurukuru ose mutauro wokumwe rauchagara nokusingaperi tinosangana, kuita izvi mumwe yakanakisisa Apps rokushandura kumativi. Zviri vakanaka kana uine imwe Android kana iPhone, uye kunyange kushandisika is.
Berlin kuenda Dresden nechitima
Hanover kuDresden nechitima
Potsdam kuDresden nechitima
Nuremberg kuDresden nechitima
15. To Make New Friends: Kusangana
Kana uri rudzi mufambi anoda kuti shamwari itsva pavaifamba, tarisa haungapfuuri. Meetup chinhu Anwendung yakatsaurirwa kubatsira wasangana wakadaro vabereki zvose pasi pose. Unogona kuumba mapoka mubereko-kwakavakirwa, nokusika zviitiko zvakadai nomuzariro anotanga uye zvokudya veko. The Anwendung kunyange ane marongero mhuri kubatanidzwa mbudzana-ushamwari mabasa. Zvakanaka!
Munich kuenda kuPrague nechitima
Berlin kuenda kuPrague nechitima
Vienna kuti Prague nechitima
16. To Get Around Kana You Anosvika: ber
Kunyange isu tichati nguva dzose kuvakurudzira kushandisa chitima panzvimbo motokari pavaifamba, kana ukaona kusvika pakati pousiku kana kuti yakananga kupi kumwe pasina basa zvauchasangana kushandisa Über. Nepo kwete ose nyika ine Über kana ayo US mukwikwidzi Lyft, anenge ose nyika ane tekisi App dzimwe mhando. Ungave uri Kazakhstan kana France, find your local taxi app and make sure to download it before hopping on the train.
Munich kuenda kuZurich nechitima
Berlin kuenda kuZurich nechitima
Basel kuZurich nechitima
Vienna kuenda kuZurich nechitima
17. Kufamba Vaya ichitenderera Streets: Google Maps App
Kamwe waita aburukira uye akawana pachako achidzungaira mumigwagwa kutsvaka yakanakisisa baguette, uchaita unofanira Google Maps kuti kumativi. Sei? Nekuti Google Maps mumwe munyika yakanaka wekushandisa Apps. Kubva kufamba madirection chitima purogiramu, Google nokukupai akafukidzwa. Even nani, unogona kukopa mepu yokushandisa is, which means in areas with spotty WiFi you can still find that hidden bistro down an alley.
To download mepu, kungoti musoro Google Maps pamusoro smartphone yako uye nomugungwa kuti mepu unodawo kushandiswa. Kamwe zviri hwokungotsvaka yenyu kutsvakwa nzvimbo, kutaipa mu “OK mepu” kupinda kutsvaka bhaa. Google vachatanga nokudhanilodha is mepu kuti foni yako kuti kushandisa chero nguva. Ndizvo!
La Rochelle kuNantes nechitima
Toulouse kuna La Rochelle nechitima
Bordeaux kuenda kuLa Rochelle nechitima
18. Mapurogiramu Ekuodha Kutevedzera Kufamba Kwako: TripIt
TripIt ari kufamba Tracking App inobatsira kuronga zvose mashoko ako panzvimbo imwe. Kubva ndege bookings kuti hotera Reservations, TripIt anoronga zvose ive nyore kuverenga urongwa anoramba iwe uri njanji. Kana vanobatanidza nhoroondo yako zvakananga Anwendung, kana mberi zvose zvenyu chisimbiso mail, uye TripIt achaita zororo. Available yagadzirwa pa-desktop, Android kana Apple iPhone, you’ll be able to use it anywhere in the world.
Genoa kuenda kuVenice nechitima
Turin kuenda kuVenice nechitima
Parma kuenda kuVenice nechitima
La Spezia kuenda kuVenice nechitima
19. Kuziva Your Currency Exchange Rate: Currency App neSave A Train
Nepo uyu angava zvishoma niche, pane zvakawanda nguva Ndakanga mumugwagwa pasina mashoko kana WiFi uye zvave wakaora kuziva Gengi. Kana chinhu unyengeri tekisi mutyairi kana kushanyira kuti chinoda iwe mari mu mari, kuva Anwendung paruoko sevadzidzi currency convert kungava godsend. Save A Train Currency App mabasa pamusoro kana is saka nguva dzose kuwanikwa kana wava.
Basel kuti Yopindirana nechitima
Bern kuKwirirana nechitima
Lucerne Kuti Inopindirana nechitima
Zurich Kuti Yopindirana nechitima
20. For zvose: WhatsApp
Kana musingadi uchitova Anwendung ichi pamusoro pafoni yako, zvitore. Nepo zvikuru North America ave achisuwa mashoko anotsanangura Mobile Anwendung, WhatsApp rinoshandiswa pose kuti mameseji, Video foni izwi zvinotoda. mukurumbira wayo vakadaro kuti mabhizimisi akawanda mhiri kwemakungwa anoshanda ane WhatsApp nhamba iri kuwedzera kana kunyange chive mwero nhamba dzorunhare. Trust us when we say you’ll need to download WhatsApp.
Florence kuenda kuAzzzo nechitima
Perugia kuna Arezzo nechitima
Bologna kune Arezzo nechitima
Siena kune Arezzo Chitima
21. Mapurogiramu Iwe Anofanirwa Kurodha usati waenda kune Ndege dzako: LoungeBuddy
Nepo hazvina nguva yakanakisisa pfungwa kubhururuka, kunyanya mukati Europe, dzimwe nguva iwe unenge uchida kubata nendege kudzokera apo nezvitima havagoni kuenda. Kana azopedzisira airport, kuita pachako nyasha uye kukopa LoungeBuddy, munhu batsira kufamba App unokubvumira kutenga discounted vawane yendege lounges. Izvi zvinonyanya kubatsira pane layovers refu avo, sezvo yendege lounges kupa pachena zvokudya uye zvinwiwa. More zvakakosha, vanoita sezvinonzi utiziro kubva Chipatapata chiri aiwanzowanika yendege zviteshi saka yako inotevera layover zvichava kunakidza.
Frankfurt kuenda kuCologne nechitima
Dresden kuenda kuCologne nechitima
Aachen kuenda kuCologne nechitima
22. For North America In Europe: Arşive Conversion App
Kunyange zvazvo vamwe vanoda anoseka North America ravo chairwo kuomerera Imperial mamiriro chipimo, ingakutemesa chakakomba chikonzero chokunetseka kana vanoenda mhiri kwemakungwa. Sei kutsanya vari makumi mapfumbamwe makiromita paawa? Zvikuru sei anoita kilogram pakati Pasta vanoyera? Wati mibvunzo iyi yose akapindura pasina nokutarira yakapusa kuburikidza kudhanilodha arşive Conversion Anwendung foni yako usati kutanga kufamba kwako kana kushandisa Save A Train noenderana Anwendung kuwanikwa pa apps Chikamu kwedu Save A Train Blog.
Berlin kuenda kuRothenburg Ob Der Tauber nechitima
Stuttgart kuenda kuRothenburg Ob Der Tauber nechitima
Munich kuenda kuRothenburg Ob Der Tauber nechitima
Frankfurt kuenda kuRothenburg Ob Der Tauber nechitima
23. Kupinda The US: Mobile Passport App
The chete nehurumende App pamusoro pamazita ichi, Mobile Passport ari inopiwa US Customs uye Border Protection kuti rubatsiro vafambi kupinda US nyore. Download pamberi wasvikapo muUnited States uye kurishandisa kuzadza mashoko yenyu foni. ndokubva, muzviise chimiro chako kamwe iwe kubata pasi uye tisangosiya hombe mutsetse kuti immigration kiosks muna US. Zviri pachena uye nyore kushandisa!
Bremen kuenda kuNuremberg nechitima
Leipzig kuenda kuNuremberg nechitima
Hanover kuenda kuNuremberg nechitima
Hamburg to Nuremberg nechitima
Ndiro runyorwa rwezvakanakisa zvemapurogiramu ekurodha usati waenda, kunyangwe iri rwendo rurefu rwechitima kana kungofamba rwendo rwuno. Kana uchida kuzombotaurazve rubatsiro zvawakaronga okufambisa, Save A Train inopa kudzidzisa matikiti pa chipa prices, chichisunungura kumusoro bhajeti yenyu zvakawanda zvokuita kana wasvika kwauri kuenda!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fapps-download-traveling%2F- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Apps longtrainjourneys Train Travel chitima rwendo famba traveltips